Soo -saaraha iyo Warshadda Nidaamka Gawaarida Suunka ee ugu Fiican GOJON
Wax -soo -saare sare oo wax -ku -ool ah oo hoos -u -socod ah iyo hab -socodsiineed oo loogu talagalay wershadda kartoonnada jiingadaha iyo sanduuqa kartoonka. Iyada oo loo marayo qaabaynta geedka oo dhan, qorshe macquul ah ayaa loogu talagalay in lagu xaqiijiyo kaarboonka otomaatiga ah ee gudbinta iyo yaraynta xoogga shaqaalaha iyo agabka
Nidaamka gudbiyaha otomaatiga ah wuxuu buuxin karaa shuruudo kala duwan oo ah kartoon jiingad ah oo fidiya ballac iyo dherer kala duwan. Madal -wadaha suunka qaybiyaha ah, qaybiyaha korantada suunka qaybsan, suunka qaybsan ee XY turner, iyo line conveyor -ka rullaluuska ah ayaa dhammaantood loo qaabayn karaa si waafaqsan fikradda macmiilka. Tusaale ahaan, hal soo -saare oo ku takhasusay soo -saaridda kartoonnada, looma baahna in dib loo cusbooneysiiyo kartoonka, kaarboonkana waa la rari karaa baakadaha ka dib, iyo habka saadka waa mid fudud. Xidhmadaha waraaqaha soo -saareyaasha waxaa loo wareejiyaa dekado badan oo markooda ah baabuurka kala -soocidda korontada. Shaqaaluhu waxay ku dhammaystiraan baakadda baakadaha ee dekedda. Geedi socodka gaadiidka oo dhan ee xidhmooyinka waa la dhammaystiri karaa si otomaatig ah ama gacanta. Nidaamka saadka ayaa si habsami leh u socda, si hufan oo heer sare ah. Soo -saareyaasha leh awoodda daabacaadda ee warshadda, kartoonka la soo saaray ayaa si toos ah loogu gudbiyaa hannaanka wax -soo -saarka soo socda: dhimista dhimista, daabacaadda, dhejinta sanduuqa, qashin -qubka, iyo kaydinta. Si loo yareeyo cadaadiska warqadda sariirta sariirta, soo -saareyaasha noocan ahi waxay u baahan yihiin inay naqshadeeyaan saadka dhirta oo dhan.
Nidaamka Kartoonka Waxgaradka leh
1. Yaraynta kharashka shaqada
2. Hawl -fududeynta
3. Buuxinta baahiyaha wax -soo -saarka iyo maareynta shirkadda casriga ah
Nidaamka Wareejinta ee Aagga Buffer
Iyada oo la hagaajiyo amarada iibsiga iyo kor u qaadista xawaaraha khadka, qaabka kaydinta ee hadda jira ma qancin karo baahida awoodda wax soo saarka. Si kastaba ha ahaatee, softiweerka GOJON wuxuu si weyn u ballaariyaa booska wax lagu kaydiyo, wuxuu hoos u dhigaa qiimaha gaadiidka, wuxuu hagaajiyaa hufnaanta hawlgalka, wuxuu hubiyaa nadaafadda & habsami u socodka aqoon -is -weydaarsiga wuxuuna awood u siinayaa booska kaydinta xaddidan inuu abuuro qiime aan dhammaad lahayn.
Soo-gelinta iyo Bixinta Goobta Hawsha
Iyada oo laga jawaabayo kor u qaadista joogtada ah ee mashiinka daabacaadda iyo mashiinka goynta-dhimista, nidaamka gudbiyaha GOJON wuxuu xalliyay dhibaatooyinka daalka maaraynta aadanaha iyo hufnaanta gudbinta, Si loo sameeyo qalabka wax-soo-saarka oo horumariya karti wax ku ool ah oo mashiinka daabacaadda iyo mashiinka goynta-dhimanaya, garowso hawlgalka caqliga leh aagga wax -ka -qabadka.
Hore: Single Facer Laminating Smart Line
Xiga: Nidaamka Gaadiidka Duubista Baabuurka
Gawaarida Suunka Module
Gawaarida Xamuulka qaada, Bangiga Erp, Mashiinka Smart Waayo Xidhmada Waraaqaha, Shaashadda Hawlgalka Aqoon isweydaarsiga, Nidaamka Rullaluudlaha, A3 Faylka Waraaqda,